बच्चन परिवार किन मन पराउँदैन ऐश्वर्यालाई ?  OnlineKhabar
बच्चन परिवार किन मन पराउँदैन ऐश्वर्यालाई ?
बलिउडका चर्चित जोडी अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या रायको विवाहको १० वर्ष पुगेको छ । तर यो अवधिमा उनीहरुको सम्वन्ध सुखद रहन सकेन ।
खासगरी ऐश्वर्या र अभिषेककी आमा जया बच्चनबीच बारम्बार उत्पन्न हुने किचलो भारतीय सञ्चारमाध्यममा छरपस्टै छन् । आमा र श्रीमतीबीचको विवादमा अभिषेक प्राय आमाकै पक्षमा हुन्छन् । यसले गर्दा पनि ऐश्वर्या आफ्नो पतिसँग खुशी छैनन् ।
एउटा फिल्मको स्क्रिनिङमा त अभिषेकले मिडियाकै अगाडि ऐश्वर्याको बेइज्जत गरेका थिए । मिडियाले अभिषेक र ऐश्वर्याको एकसाथ फोटो खिच्न खोज्दा अभिषेक ‘उनको मात्रै खिच्नु’ भनेर सन्किदै हिँडेका थिए । सो घटनाबाट ऐश्वर्या निकै लज्जित भइन् ।
यता सासु-बुहारीको सम्वन्ध बिग्रेको चाहिँ ऐश्वर्याको फिल्म ‘धुम टु’ को बेलादेखि नै हो । सो फिल्ममा अभिनेता ऋतिक रोशनसँग ऐश्वर्याको लिपलक सिन थियो । उक्त सिनलाई जयाले पचाउन सकिनन् र आपत्ति जनाइन् । बच्चन परिवारले सो दृष्य फिल्मबाट हटाउनसमेत निर्माण पक्षलाई दवाव दिएको थियो । सोही फिल्ममा ऐश्वर्याले लगाएको छोटो लुगालाई लिएर पनि जयाले बखेडा गरेकी थिइन् ।
केही समयअघि रिलिज भएको फिल्म ‘ए दिल है मुश्किल’ मा रणवीर कपुरसँग ऐश्वर्याले दिएको इन्टिमेट सिनलाई लिएर पनि बच्चन परिवार रुष्ट बनेको छ । स्वयम् अभिषेक बच्चनलाई पनि यो कुरा मन परेको छैन । उक्त फिल्मको स्किनिङमा बच्चन परिवारका कोही पनि उपस्थित भएनन् । अभिषेकले आफ्नी पत्नीको फिल्मलाई एक पटक पनि प्रमोसन गरेनन् ।
छोरी आराध्यालाई लिएर पनि ऐश्वर्या र अभिषेकबीच खटपट चलिरहेको बताइन्छ । समाचारअनुसार अभिषेक आफ्नी छोरीलाई बालकलाकारका रुपमा हिन्दी सिनेमामा इन्ट्री गराउन चाहन्छन्, तर ऐश्वर्या यसका लागि तयार छैनन् । -एजेन्सी
२०७४ वैशाख ८ गते ८:३० मा प्रकाशित
#अभिषेक बच्चन#अमिताभ बच्चन#ऐश्वर्या राय
Man Karma लेख्नुहुन्छ | २०७४ वैशाख ८ गते १४:३५
tetro thulo kalakar ko pariwar bhayera ni aafno buhari kalakar bhayeko pachauna sakdaina … upalabdhi jati thulo bhaye ni soch jhinga ko tauko jatro nai rakhe pachhi samasya aayi haal chha. Ahile pani Aishwarya ko demand tyo flop actor Abhishek ko bhanda dherai badhi chha .. Aishwarya chahin kina afno kaam garna napaunu
Pratima Karki लेख्नुहुन्छ | २०७४ वैशाख १० गते १५:०७
THEY ALL ARE ACTOR AND ACTRESS…EVEN JAYA BACHAN ..SO SHE MUST THINK THAT THOSE THINGS ARE MINOR IN FILM INDUSTRY…THEY HAVE ALSO GIVEN SUCH INTIMATIC SCENE IN THEIR TIMES,,,THIS IS WORTHLESS TO BE RUDE WITH AISHWARIYA..I AM IN THE SIDE OF ‘AISH’